Outrigger Hotels and Resorts any Hawaii sy Thailand: Mitsiky ao ambadiky ny sarontava
Home » Hawaii Travel News » Outrigger Hotels and Resorts any Hawaii sy Thailand: Mitsiky ao ambadiky ny sarontava
Ahoana ny fomba itsikianao ao ambadiky ny sarontava? Outrigger Hotels and Resorts dia mety ho ohatra mamirapiratra handraketana ny fomba Aloha Tsiky ao Hawaii sy ilay Amazing Thailand Smile dia azo atao ao ambadiky ny saron-tava ary miaraka amina toerana lavitra ara-tsosialy.
Hawaii sy Thailand dia manana synergy betsaka amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny sy amin'ny fizahan-tany. Samy misokatra ny fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany, ary samy manana ny toerana itodiana Outrigger Hotels and Resorts.
Hihaona amin'i Carly Clement, mpitondra tenin'ny Outrigger, any Waikiki. Outrigger dia iray amin'ireo vondrona fialantsasatra lehibe indrindra any Hawaii misy fananany ihany koa ao Maldives, Mauritius, ary Thailand.
Ny Outrigger Waikiki Beach dia nijanona nisokatra nandritra ny 6 volana nikatonan'ny quarantine. Nanazava ny fomba nahafahan'ny mpizahatany nijanona nandritra ny krizy i Carly. Nohazavainy ihany koa ny zavatra antenaina rehefa mamandrika ny Outrigger Waikiki Beach ankehitriny fa hiverina hitsidika ny nosy Oahu ireo mpitsidika.
Hawaii dia nanokatra ny fanjakana ho an'ny mpitsidika, ary midika fiovana lehibe ho an'ny hotely izany, izay midika ho an'ny Outrigger ihany koa. Ny vaovao tsara dia misokatra i Dukes ary hita ao amin'ny Outrigger Waikiki Beach ny buffet breakfast. Misy ihany anefa ny fepetra takiana vaovao. Carly mizara izay misy sy ny fomba hiaina fialan-tsasatra tsara any Hawaii na dia mandritra ny areti-mandringana aza.
The Outrigger dia trano fandraisam-bahiny malaza any Hawaii. Raiso ny farany momba ny hotely vonona handray ireo vahiny hiverina ao amin'ny Aloha Fanjakana.
kitiho eto raha hihaino ny podcast
Nanitatra ny curfew COVID-19 i Frantsa aorian'ny fisondrotan'ny tranga vaovao
Mpitarika fizahantany hitarika ny famerenana amin'ny laoniny an'i North Queensland
Filohan'ny birao afrikana misahana ny fizahan-tany amin'ny faran'ny ramadany